Music Unlimited, sida magacaba ka muuqata, waa adeeg music ah loogu tala galay in ay bixiyaan music sida ugu badan ee aad u baahan tahay. Waa deeqsi in ilo music la ton oo ah gabayo, playlists iyo channels in la doorto. Ad-free waa waxa xusid mudan halkan. Waa maxay dheeraad ah, offline loo maqli karo laga heli karo telefoonada macruufka Android ama.
Laakiin halkan yimaado arin, waxaa laga yaabaa xayiran gabayo bixi ama playlists qaato inta badan meesha bannaan ee telefoonada aad. Sidaas fikrad wanaagsan inaad kala soo baxdo music ka Music Unlimited si aad u computer meesha bannaan oo waa weyn waxa ay noqon doontaa. Markaas wareejiyo qalabka aad u dhegaysato on go ah, la abuuro ringtones ama xataa gubi gal CD ah.
TunesGo iyo Streaming taariikhqorihii Audio yihiin waxa aad u baahan tahay halkaan si ay u caawiyaan. Waxay ka mid yihiin barnaamijyada miiska ka go'an in ay soo bixi dhan Music music Unlimited xor ah oo aan khasaaro tayo leh. Mar kasta oo ay dhawaaqa jiro ka your computer, Waxay dareemi karaan oo ay si toos ah u qoraan ka kaarka codka ee your computer. Markaas waxaad ku wareejin karaa music si ay Lugood iyo abuuro ringtones la qasabno yar. Aan hubi sida loo isticmaalo sida hoos.
Xalka 1.TunesGo ---- Sida loo Download Music ka Music Unlimited oo lacag la'aan ah
Sida loo Download Music ka Music Unlimited oo lacag la'aan ah?
Waxaad gudbin karaan tutorial this: Sida loo Download Music ka Music Unlimited free via TunesGo
1 Ku rakib Music downloader Unlimited
Ka hor inta uusan bilaaban, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo barnaamijkan iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Waxaa jira laba nooc ka shaqeeya si la mid ah. Sidaas version daaqadaha laga qaadi doono sida tusaale ku sugan qodobadiisa soo socda.
Fur barnaamijka dib markii la rakibey oo riix badhanka Record ku yaal dhinaca midig. Markaasay aad diyaar u tahay.
2 Download music ka Music Unlimited
Tag music.sonyentertainmentnetwork.com in ay dhagaystaan ​​music ka this site. Marka waxaa sanqadhaya, waxaa jiri doona downloader-upka u Qoraynaa.
Hubi internet-ka sida wanaagsan ugu socda, markaas waxaad ku qori karta kuwan raadkaygay badan intii suurto gal. Heesahaas ayaa ka in si buuxda loo kala qeybin doonaa ilaa by barnaamijka sida wakhtigii aamusnaan dhexeeya.
Markaas waxa la joogaa wakhtigii si ay u gudbiyaan music qalabka aad. Via Lugood, aad u hagaagsan kartaa in iDevices kasta. Dooro music Maktabadda iyo guji badhanka dar Lugood in. Ama waxaad xaq-riixi kartaa heeso iyo dooro dar maktabadda Lugood. Markaas Lugood laftiisa lagu daahfuri doonaa si ay u muujiyaan oo dhan music ee playlist SAR ah. Mid aad u fudud, miyaanay ahayn?
By jidkii, si ay u abuuraan ringtones, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad guji icon dawan iyo dooro qayb ka mid ah in bitmap ah taasoo keentay in la badbaadiyo. Iyo Lugood noqon kartaa gubi a free CD si aad u samayso inta badan. Sidaas bilaabo hadda ku raaxaysan aragnimo music weyn.
> Resource > Video > Sida loo Download Music ka Music Unlimited